သင့်ကိုယ်ပိုင်နာရီကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ ဆိုတာဘာလဲ။ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံး သင့်ကိုယ်ပိုင်နာရီကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ မှအကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေရန်
Custom Watch Dials
Start From The Heart, Express More Beauty
ပုံစံ - Optional system
▲အမျိုးမျိုးသောပုံစံများ၏ panel ပုံစံနှင့် shell အရောင်သည်သိုင်းကြိုးပုံစံနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်.
▲သင်ရွေးချယ်ရန်ဖောင့် ၄ ခုပေးပါ
က.စံရိုးရှင်း B ကို.လေတိုက် ဦး တည်ချက်ကွေး C.အနုပညာမြက်အမျိုးအစား: D.လှပစတိုင်
Xing Heart Enterprise Partnership
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.designwatches.com.tw/my/customize-your-own-watch.html
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ Xing Heart Enterprise Partnership အရည်အသွေးမြင့်မားနှင့်အတူ clients များပေးအပ်မှာသူတို့ကိုအထောက်အကူပြုသောကျယ်ပြန့်စက်မှုလုပ်ငန်းဗဟုသုတအသိပညာများရှိသည် သင့်ကိုယ်ပိုင်နာရီကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ နိုင်ငံတကာအရည်အသွေးစံနှုန်းများကိုလိုက်နာမှုနှင့်အတူဒီဇိုင်းဖြစ်ကြောင်း Taiwan ။ သာယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရရောင်းချသူထံမှထိုထုတ်ကုန်သည့်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်တစ်ခုချင်းစီရဲ့အရည်အသွေး controller များ၏အတွေ့အကြုံနှင့်ကျွမ်းကျင်အဖွဲ့၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်တစ်ဦးတင်းကြပ်ရဲ့အရည်အသွေးစမ်းသပ်ခြင်းကိုသည်းခံ။
သို့: Xing Heart Enterprise Partnership
ID.အမိန့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစောင့်ကြည့် အခြေခံနာရီကိုဝယ်ပါ သင်၌ရှိဖောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရည်ညွှန်းနိုင်သည်”ကိုက်ညီသောစနစ်”နာရီ၏စတိုင်နှင့်ကိုက်ညီရန်. စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူပါ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ,သင်လုပ်ချင်သောစိတ်ကြိုက်စီမံချက်ကိုရွေးချယ်ပါ. pointer စိတ်ကြိုက်/panel ကိုစိတ်ကြိုက်/နောက်ကျောအဖုံး marking သက်ဆိုင်ရာစိတ်ကြိုက်သတင်းအချက်အလက်များကိုဆွေးနွေးရန်ထွက်ကုန်နှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်သွယ်ပါ ငွေပေးချေမှုပြီးနောက်,သက်ဆိုင်ရာအထူးပြုဆွေးနွေးမှုများအတွက်အွန်လိုင်းဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်သင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်.စိတ်ကြိုက်အကြောင်းအရာပေးပြီးနောက်,ဒီဇိုင်နာသည်ပုံဆွဲခြင်းနှင့်စီစဉ်ခြင်းတို့ကိုစီစဉ်ပေးပါလိမ့်မည်,ပြီးပါကမူကြမ်းကိုပြင်ဆင်ရန်နှင့်အတည်ပြုရန်သင့်ထံသို့ပေးပို့ပါ. Proofreading နှင့်ထုတ်လုပ်မှု proofreading ၏အတည်ပြုချက်ကိုသတင်းစကားကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်,သင်လိုအပ်သကဲ့သို့သင်တို့ချိန်ညှိစေနိုင်သည်.အတည်ပြုချက်မှန်လျှင်,ကထုတ်လုပ်မှုစင်မြင့်ဝင်ရန်စီစဉ်ပေးလိမ့်မည်.ထုတ်လုပ်မှုအချိန်မှာ ၁၀ ခန့်ဖြစ်သည်-၁၅ ရက်(စနေနေ့ မှလွဲ၍,တနင်္ဂနွေနှင့်ထိုင်ဝမ်အားလပ်ရက်များ) စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသောစီမံကိန်းအချို့သည်အလုပ်လုပ်ရက် ၃၀ လိုအပ်သည်(Jinzhi စီမံကိန်းများကိုစိတ်ကြိုက်) သင်္ဘော ထိုင်ဝမ်.ရိယာ｜အိမ်ဖြန့်ဝေ,၇-11 စျေးဝယ်ရန်ဆိုင် အိမ်အပ်နှံမည့်နေ့ရက်သည်တနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့ဖြစ်သည်.သငျသညျတနင်္ဂနွေသို့မဟုတ်အခြားအခြေအနေများအောက်တွင်အထုပ်ကောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်,ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ပုဂ္ဂလိကသတင်းစကားဖြင့်အသိပေးပါ. ပင်လယ်ရပ်ခြားဒေသများ｜SF ကုန်ပစ္စည်း
အကောင်းဆုံး သင့်ကိုယ်ပိုင်နာရီကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် သင့်ကိုယ်ပိုင်နာရီကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ဖြူးသူ၊ Taiwan
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.designwatches.com.tw/design-custom-watch.html
ADD: No. 134, Ln. 214, Sec. 1, Yanping Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
Customize Your Own Watch	| Personnalisez Votre Propre Montre	| Eigene Armbanduhr Designen	| Настройте Свои Собственные Часы	| Relogio Design	| Orologio Customizzato	| अपनी खुद की घड़ी को अनुकूलित करें	| Personaliza Tu Propio Reloj	| Personaliseer je eigen horloge	| تخصيص ساعتك الخاصة	| Tùy chỉnh đồng hồ của riêng bạn	| ปรับแต่งนาฬิกาของคุณเอง	| Sesuaikan Jam Tangan Anda Sendiri	| নিজের ঘড়ির কাস্টমাইজ করুন	| Kendi Saatinizi Kişiselleştirin	| 自製手錶